नेपाल आज | ‘भाटभोटेनी’ ले किन स्विकार्न सकेन गणतन्त्र ?
‘भाटभोटेनी’ ले किन स्विकार्न सकेन गणतन्त्र ?
सोमबार, ०६ पुष २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
मलुकमै नाम चलेको र १८ वटा शाखा मार्फत ब्यापार गर्दै आएको भाटभोटेनी सुपर मार्केटले गणतन्त्रका उपलब्धि र त्यसले ल्याएका अवसरहरु उपयोग गर्न कुनै कसर वाँकी राखेको छैन । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मुल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई भने अझै पनि स्विकार गर्न सकेको छैन ।
सुपर मार्केटका गतिविधि र प्रचार सामग्रीले अहिले पनि गणतन्त्र स्विकार गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ। भाटभटेनीका अधिकांश प्रचार सामग्रीमा अहिले पनि ‘नेपाल अधिराज्य’ भनेर सम्वोधन गर्ने गरेको पाईन्छ ।
हुन त भाटभटेनीका मालिक मिनवहादुर गुरुङ्ग सधैभरी सत्ता र शक्तिको पुजारी नै रहे। महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेल मार्फत केपी ओलीसँग राम्रो सम्वन्ध स्थापित गरेका गुरुङ्ग अहिले पनि सत्ताको वरीपरिनै छन् ।
सत्तामा जो आए पनि उनलाई खासै फरक परेको छैन । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुसँग लोलोपोतो घस्ने र सिमित नेताहरुलाई चन्दा दिएर अधिकांश पार्टीमा रवाफ देखाउने उनको पुरानै शैली हो। तर, उनको यो स्वभावले धेरै मान्छे झुक्निे गरेको पाईएको छ ।
तत्कालिन युवराज दिपेन्द्रकी प्रेमीका देवयानी राणा किनमेलका लागि भाटभटेनी जान्थिन। गुरुङ्गले यसलाई समेत उपयोग गर्न छोडेनन्। देवयानीको किनमेललाई उनले राजपरिवारसँगको सम्वन्धका रुपमा प्रचार गरे। यस वाहेक सुपर माकेर्टमा राजा–महाराजाका ठुल–ठुला फोटो राखेर राजाको सेवकको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्थे । जस्ले उनको ब्यापारको संरक्षण र सर्वसाधारणलाई सुपरमार्केटमा आकर्षण वढाएको जानकारहरु वताउँछन् ।
माओवादी जनयुद्धका कारण देशमा आतंकको माहौल थियो । तर, गुरुङ्गलाई त्यो युद्धले कुनै प्रभाव पारेन। स्रोतका अनुसार उनले माओवादी नेतालाई पनि चन्दा दिएर चुप लगाएका थिए । १९ जेठ २०५८ को दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रको उदय भयो। तर, राजाको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै देशका प्रमुख सात राजनीतिक दल सडकमा एक ठाउँ उभिए । यसपछि विद्रोही माओवादीसँग उनीहरुको सहकार्य भयो ।
२०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरे । विद्रोही माओवादी समेत शान्ति प्रक्रियामार्फत संसदीय राजनीतिमा ल्याइयो । ५ मंसिर ०६३ को शान्ति सम्झौतापछि देशमा प्रचण्डको उदय भयो ।
त्यसवेला प्रचण्डको रापताप कसैले कल्पना गर्नै नसक्ने थियो । उनी सवैका लागि रहस्यमय ब्यक्तिव थिए। जन युद्धका नायकका रुपमा उदायका प्रचण्डको ओझ सवैका लागि लोभलाग्दो थियो। प्रचण्ड व्यक्ति होइन, एक शक्तिका रुपमा उदाए। जसले राजालाई घुडा टेकाए र नारायणहिटीबाट नागार्जुन जान बाध्य बनाए।
प्रचण्डको यहि राजनितिक प्रभावका विचमा भाटभटेनीमा ‘प्रचण्डको लगानी छ’ भनेर हल्ला चल्यो । हल्लाको विषय हालसम्म पनि पुष्टि भएको छैन । प्रचण्डको सम्पत्ति विवरण हेर्दा पत्याउन सक्ने प्रसस्त आधार छन् तर पुष्टि गर्ने आधारहरु छैनन्। यस विषयमा प्रचण्डले मुख नखोल्नुलाई पनि अर्थपुर्ण रुपमा हेरिन्छ।
गुरुङ्गले भने कसैलाई प्रयोग गर्न नछोड्ने तर आफनो रवैया नछोड्ने उनका गतिविधिले प्रस्ट हुने उनको स्वभाव वुझेकाहरु वताउँछन् ।